देशभर ११५ वडाध्यक्षको पद खाली, खाली पदबारे के हुन्छ ? « Naya Page
देशभर ११५ वडाध्यक्षको पद खाली, खाली पदबारे के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति :6December, 2018 4:15 pm
काठमाडौं, २० मंसिर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा १४६ वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेको बताएका छन् ।
गत वर्षको निर्वाचनपछि मुलुकभरमा करीब १४६ मुद्दा परेको र तीमध्ये ११५ वटा मुद्दा वडा अध्यक्षकै रहेको उनले बताए । निर्वाचन आयोगले राजविराजमा गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले मुलुकभरमा खाली रहेको वडाध्यक्षको पदबारे सरकारले ध्यान दिन नदिएको गुनासो पनि गरे ।
‘विभिन्न स्थानीय तहका १४६ जनप्रतिनिधिमाथि मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायरपछि ती पद रिक्त छन् । त्यसमध्ये ११५ त वडाध्यक्षकै हुन्,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘ती मुद्दामा हालसम्म निक्र्याेल हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको छ । तर, सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।’
स्थानीय तहमा रहेको भूमिका अनुसार रिक्त वडाध्यक्षको पदपूर्ति गर्न निर्वाचन हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले यसप्रति नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको धारणा व्यक्त गरे ।
धेरै ठाउँमा रिक्त वडाध्यक्षको पदपूर्ति गर्ने सवालमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको तर, सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख आयुक्त यादवले विवाद न्यूनीकरण गर्न कानुनको पालना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । विगतको निर्वाचनमा मतदानका वेला मतदान केन्द्रमा मतगणना नगरेका कारण पनि विवाद बढेको भन्दै अबको निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमै मतगणना गरेमा कुनै पनि विवाद नहुने विचार उनले व्यक्त गरे ।
उनले सप्तरी जिल्लामा गत वर्ष शान्तिपूर्वक र विवादरहित निर्वाचन सम्पन्न गराएको भन्दै स्थानीय, सुरक्षाकर्मी, प्रहरी प्रशासन, जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलगायत जिल्लावासीलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
जीतगढी किल्लाबाट प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, ‘क्रान्तिको नाममा ‘उपद्रो’ गर्ने छुट कसैलाई छैन’
बुटवल, ७ बैसाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको युग विकास र समृद्धिको युग भएको